How to check Integrity of MIUI Update files – Xiaomi Guide
Xiaomi ဖုန်းတွေမှာ Updater ကနေ ROM တင်ချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်… TWRP ကနေတင်ချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ် လုပ်ချင်ရင် Recovery ROM zip file တွေကို ဒေါင်းပြီး တင်ကြပါတယ်။ အဲလိုဒေါင်းပြီးတင်ရာမှာ တင်မရတာတွေဖြစ်တာက ကိုယ်ဒေါင်းထားတဲ့ file က မကောင်းတာလဲ အကြောင်းတစ်ခုအနေနဲ့ပါဝင်ပါတယ်။ Updater ကနေတင်တာကတော့ file မကောင်းတာအပြင် အခြားသောလိုအပ်ချက်တွေကြောင့်လဲ ဖြစ်နိုင်ချေ အများကြီးရှိတတ်ပါသေးတယ်။ TWRP ကနေတင်တာကတော့ Zip file မကောင်းတာရယ်၊ ကိုယ်သုံးတဲ့ TWRP က ROM Zip တစ်ခုကို ပြီးပြည့်စုံအောင် Flash ပေးဖို့ လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းမရှိတာကြောင့်ရယ်.. သည်နှစ်မျိုးကြောင့်ပဲဖြစ်လေ့ရှိပါတယ်။ Zip မကောင်း ပြန်ဒေါင်းရမည်ပေါ့။ TWRP ကသေချာအလုပ်မလုပ်နိုင်ရင် TWRP ကို ချိန်းပေးရမည်ပေါ့။ Updater ကနေတင်တဲ့အခါ ပေါ်လာတတ်တဲ့ Error လေးတွေကို ဖတ်ကြည့်ပြီး ဘာတွေလိုအပ်ချက်ကြောင့် ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာမျိုးလေးတွေကို သည် Post [ –> Common Updater App Problems <– ] ထဲမှာတော့ ရေးသားထားတာရှိပါတယ်။ ကြာပြီဆိုတော့ MIUI Version အသစ်တွေမှာ ထပ်ပေါ်လာတတ်မယ့် Error msg အသစ်လိုမျိုးလေးတွေလဲ ရှိချင်ရှိလာမှာပါပဲ..။
ကိုယ်ဒေါင်းထားတဲ့ ROM Zip ကို ကောင်း မကောင်းစစ်တာကတော့ file ရဲ့ MD5 Checksum ကို စစ်ကြည့်လိုက်တာပါ။ သည်လိုစစ်ဖို့ ES File Explorer app လေးကိုသုံးလို့ရပါတယ်။ အခြား File Manager app တွေမှာလဲ ရတာတွေ များပါတယ်။ Mi default File Manager app မှာတော့ အဲလိုစွမ်းဆောင်နိုင်ရည် မတွေ့မိပါ။ App လေးက Google Play Store မှာ ရှာပြီး အချိန်မရွေး ဒေါင်းထည့်နိုင်ပါတယ်။ Any users, any regions ကို support ပေးထားလို့ ရှာမရဘူးဆိုတာမရှိနိုင်ပါဘူး။
Files တွေဒေါင်းရင် Downloads ဆိုတဲ့ Folder အောက်မှာပဲ ရှိတတ်တာမို့ ES File Explorer ကို ဖွင့်။ Internal Storage ထဲသွား။ မိမိဒေါင်းထားတဲ့ zip file လေးကို ကြာကြာလေးဖိလို့ Select လုပ်လိုက်ပါ။
File ရဲ့ Properties ကိုရွေးလိုက်ပါ။
Checksum values တွေကို တွက်ခိုင်းလိုက်ပါ။
Checksum values တွေ တွက်ပေးနေပါလိမ့်မယ်။ ခဏစောင့်ပေးပါ။
Xiaomi ROM Zip ရဲ့ filename မှာ MD5 Checksum value ထဲက ရှေ့ဆုံး Hex Character ၁၀ လုံး ပါပါတယ်။ ပုံပါအတိုင်းယှဉ်ကြည့်လိုက်ပါ။ တူနေတယ်ဆိုရင် မိမိဒေါင်းထားတဲ့ ROM Zip သည်ကောင်းတယ်။ တင်ဖို့လုပ်တာတွေမှာ Error ကင်းတဲ့ဟာလို့ သတ်မှတ်ထားနိုင်ပါပြီ။ Error တက်လာရင် အခြားသောအပိုင်းတွေကိုသာ စဉ်းစားကြည့်ဖို့ပဲ လိုအပ်ပါတော့မယ်။ WiFi လေး Free ရတုန်းမို့လို့ rom ဒေါင်းထားမယ်။ ပြီးမှတင်မယ်ဆိုတာမျိုးဆိုလဲ ပြီးကတည်းက စစ်ဆေးထားနိုင်တာမို့ Checksum မမှန်ရင် file ဖျက်၊ ပြန်ဒေါင်း စတာတွေ မတင်ခင်ကတည်းက လုပ်ယူဖို့ အဆင်ပြေတာပေါ့ခင်ဗျာ. 😀
Recovery rom zip က filename ကိုကြည့်ပြီး မိမိ rom ရဲ့ Informations တွေအကုန်ကို အောက်ပါအတိုင်းခွဲခြား သိရှိ မှတ်သားနိုင်ပါတယ်။
ကိုယ့်ဖုန်း Model ပါ.. သည်မှာတော့ Mi Max Prime ပေါ့။ Global လို့ဆက်ပါနေတာကတော့ Global rom မို့လို့ပါ။ China rom ဆိုရင် Global ဆိုတဲ့စာသားပါမှာမဟုတ်တော့ပဲ ဖုန်း Model ပဲ ပါပါမယ်။
MIUI Version ပါ။ V.10 ဆို MIUI 10 ပေါ့။ ဒါကိုကြည့်လိုက်ရင်ပဲ ကိုယ်တင်မယ့်ဟာက MIUI ဘယ်လောက်လဲ ဆိုတာ သိနိုင်ပါတယ်။ သူများတွေကို လိုက်မေးနေစရာ သိပ်မလိုလှပါဘူး.. ။ 😀 Beta rom တွေဆိုရင်တော့ အဲလိုမပါပါဘူး။ သူထွက်တဲ့ Date ပဲ ပါလာပါမယ်။ Year/Month/Day ပုံစံနဲ့ပါ။ 8.10.25… ၂၅ ရက် အောက်တိုဘာ ၂၀၁၈ က Release လုပ်တာပေါ့.. စသည်ဖြင့်….။
ROM code ပေါ့။ တစ်ခုချင်းစီ အသေးစိတ်လို သိနေစရာမလိုပါဘူး။ ဘယ်ဖုန်းမဆို General မှန်နေမယ့်ဟာလေးတွေက ရှေ့ဆုံးက N ဆိုတာ Android Version ပါ။ K ဆို KitKat (Version 4), L ဆို Lollipop (Version 5), M ဆို Marshmallow (Version 6), N ဆို Nougat (Version 7), O ဆို Oreo (Version 8), P ဆို Pie (Version 9) စသည်ဖြင့် သိနိုင်ပါတယ်။ သည်တော့ ဒါတင်လိုက်ရင် Android version ဘယ်လောက်ဖြစ်သွားမှာလဲ သူများကို လိုက်မေးနေစရာ မလိုလှပါဘူးနော်.. 😀 😀 😀 ဖုန်းထဲက Settings -> About Phone -> MIUI Version နေရာမှာလဲ အဲဒါပါပါတယ်။ လေးလုံးနဲ့ငါးလုံးမြောက်ကနေရာ (အခုဟာမှာ MI)… MI သည် Global rom မှာပါတဲ့ Code ပါ။ CN ဆိုရင် China rom ပါ။
အဲသည် character ၁၀လုံးကတော့ ကျွန်တော်တို့ file ကောင်း မကောင်းစစ်တဲ့ MD5 Checksum value ထဲက ရှေ့ဆုံး ၁၀ လုံးပါပဲ။ အဲဒါကို ကြည့်စစ်တာပါ။
နောက်ဆုံးဟာကတော့ Android version အတိအကျပါ။ Major Version.Minor Version ပါ ပါပါတယ်။ 7.0, 7.1, 8.0, 8.1 စသည်ဖြင့်ပေါ့။
ROM တွေကိုဒေါင်းမယ်ဆိုရင် တစ်ခါတည်းသာ အပြီးဒေါင်းပါ။ Pause လုပ်ထားလိုက်.. နောက်မှ Resume လုပ်လိုက် သိပ်မလုပ်သင့်ပါဘူး။ ဖုန်း Browser, Download Manager က ကွန်ပျူတာမှာသုံးတဲ့ IDM တို့လို connections အများကြီးကို handle လုပ်၊ ရလာတဲ့ data packets တွေကို မှန်ကန်အောင်ပြန်စီပေးပြီး file ပြန်လုပ်ပေးသလောက် အတိအကျ မစွမ်းနိင်ပါဘူး။ ဖုန်းမှာလဲ အစွမ်းထက် Download Manager app တွေရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် users တော်တော်များများအတွက်က Download လင့်ကိုနှိပ်မယ်။ ဒေါင်းမယ် ဆိုတာလောက်ပဲသိတာများပါတယ်။ Third party app တွေနဲ့ တွဲစပ်သုံးတာတွေမျိုး လူတိုင်းလိုက်မလုပ်တော့ ဒေါင်းမယ်ဆိုရင် တစ်ခါတည်း အပြီးသာဒေါင်းပါ။ Data package ဝယ်လုပ်ရတယ်ဆိုရင် အစကတည်းက လုံလောက်အောင် ဝယ်ထားလိုက်ပါ။ ဒါဆိုရင် ကိုယ်ဒေါင်းတဲ့ rom zip တွေဟာ checksum error ကင်းနိုင်ပါတယ်။
Recovery ROM zip တွေကို ( Xiaomi rom, firmware,.. ဘယ်လိုပြောပြောရပါတယ် ) နှစ်နေရာမှာတင်ပေးပါတယ်။ Global rom တွေကို Global Xiaomi Forum မှာတင်ပေးပြီး China rom တွေကို China Xiaomi Forum မှာတင်ပေးပါတယ်။ အရင်ကလို Global Forum တစ်ခုထဲမှာ တင်မပေးတော့ပါ။ သက်ဆိုင်ရာ Forum က Download Page နေရာ ဝင်ကြည့်ရင်လည်း Device အစုံအတွက် တင်ပေးထားတာမျိုး တွေ့ချင်မှတွေ့မှာပါ။ အနဲဆုံး MIUI 10 beta rom ထွက်နေပြီဖြစ်တဲ့ဟာတွေလောက်သာ တင်ပေးထားတာမျိုးတွေ့ရပါမယ်။ အခု Update ထွက်ပြီဆိုတာနဲ့ အခု လင့်ရောက်နေတာမျိုး Up to date တော့ မဖြစ်လှပါ။
သည်တော့ China rom လိုချင်ရင် China Xiaomi Forum Download Page မှာရှာ။ Global rom လိုချင်ရင် Global Xiaomi Download Page မှာရှာလို့ အလွယ်မှတ်ထားနိုင်ပါတယ်။ သက်ဆိုင်ရာ forum တွေမှာ Xiaomi ဖုန်း တစ်ခုစီအတွက် Forum Threads တွေရှိပါတယ်။ အဲသည်ထဲမှာ ROMs ဆိုတဲ့ Thread လဲပါပါတယ်။ အဲလိုထဲတွေမှာ Up to date ဟာတွေကို post တစ်ခုအနေနဲ့တင်တင်ပေးပြီး လင့်တွေပေးပါတယ်။ အချို့သော Forum Moderator တွေကလည်း ဖုန်း model တော်တော်စုံစုံအတွက် လင့်တွေ အမြဲ Update လုပ်ပေး၊ စုပေးထားတဲ့ Post တွေရှိပါတယ်။ ဝင်ရှာရင်းတွေ့ရင် မှတ်ထားပြီး ကိုယ်လိုရင် ရှိမလား ဝင်ဝင်ကြည့်ပေါ့။ အဲလိုပဲ မှတ်သားထားပြီး ရှာယူရပါတယ်။
MIUI Fans များ စိတ်ရွှင်လန်းချမ်းမြေ့ပါစေ…. 🙂